UMnu uMaano Khodani, umlimi omncane waseDivhane, eVhembe, eLimpopo
LIYASIMAMA ibhungu laseDivhane, esifundeni iVhembe, eLimpopo elaqala lilima njengawo wonke umuntu ngemva kokushiya isikole eneminyaka ewu-16. Nokho lona ligxile ekulima okungavamile endlini emnyama – ugalikhi.
UMnu uYandisa Zulu, umsunguli weketela iZuluish
KUFEZEKE iphupho leminyaka eyisikhombisa koqophe umlando eba wusomabhizinisi wokuqala omnyama kuleli ukusungula iketela elithi yena.
UNkk uNokuthula Magwaza, isikhulu esiphezulu seBloom Marketing
Ukungasabi ukuzikhulumela nokucela into ayifunayo yikhona okumvulele iminyango emsebenzini nokukhulisa ibhizinisi lakhe. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
WASHESHA ukufunda ukuthi kuyasiza ukuzihlupha ngezinto nokuzikhulumela uyicele into oyifunayo. Lokhu ngezinye zezinto ezimsizayo neziwumgomo aphila ngawo futhi ezimvulele iminyango ngenkathi esaqashiwe.
UNkk uNokwanda Dlamini, umsunguli weHomecooked, yaKwaMashu, eThekwini, KwaZulu-Natali
AKUJWAYELEKILE ukuthi ubaba wekhaya kube wuyena ocabangela owakwakhe ukuthi avule ibhizinisi ngento ayithandayo njengokupheka. Kwenzeka kanjalo kubanikazi bebhizinisi lokupheka iHomecooked esizakhele igama KwaMashu, eThekwini, KwaZulu-Natali.
NGENHLANHLA lapha eNingizimu Afrika uma sikhuluma ngomgomo (weCOVID-19), abantu abaningi bayakubona ukubaluleka kwawo. Yebo, nathi njengamanye amazwe sinabo labo bantu abangahambisani nawo.
UNkk uHoney Mamabolo, isikhulu esiphezulu seSouth African Mint, eyenza imali ewuhlweza
UKUZAMA ukujwayela ushintsho olulethwe yiCOVID-19 endleleni okuphilwa ngayo nokusetshenzwa ngayo yinto ezume wonke umuntu engalindele. Kukhona nokuyimanje abasazama ukulujwayela. Awucabange-ke ukuthi lolu shintsho lunjani uma usanda kuthatha izintambo enkampanini entsha?
Angikhumbuli kahle. Loko kusho ukuthi noma kungenzeka ukuthi ngangiphiwa kodwa kwakuyinto engajwayele ukwenzeka. Nokho abazali bami babengithengela yonke into engangiyidinga. Sasingaswele ekhaya.
Okhulumela umNyango wezoHwebo, iziMboni nokuNcintisana mNyango uMnu uBongani Lukhele, uchaze ngosizo kosomabhizini ngemva kokucekelwa phansi kwamabhizinisi
UMNYANGO wezoHwebo, iziMboni nokuNcintisana usuhlanganise usizo olunhlobonhlobo lokulekelela osomabhizinisi abathinteke ngenxa yezibhelu ezihlasele KwaZulu-Natali nakwezinye izindawo zaseGauteng ngenyanga edlule.
UNkk uGugu Mkhize, umnikazi weNdolethu Pharmacy eseMtubatuba, KwaZulu-Natali
Ukuyoganela kwenye indawo kuholele ekutheni avule ibhizinisi osenekhemisi lakhe. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO
UKUTHOLA umendo nokuthuthela kwenye indawo kwabanye abantu kuba nezinselelo zokuqala phansi ufune umsebenzi omusha. Kodwa kuNkk uGugu Mkhize ukushada nokuthutha eThekwini kwamvulela ithuba elisha lokusungula ibhizinisi endaweni entsha.
Yinkulu indima esikhathuliwe ukulungisa inkinga yokushoda kukagesi. Nokho kukhona lapho kusashoda khona kancane, kuloba uBusi Mavuso
KUBE nenqubekelaphambili enkulu ethinta olunye ushintsho osekunesikhathi iBusiness Leadership South Africa (iBLSA) ilukhankasela. UmNyango wezokuMbiwa Phansi namaNdla ushicilele ngokusemthethweni umthetho omusha, okuwu-Schedule 2 womthetho olawula ugesi i-Electricity Regulation Act.
KULE ngosi ngithanda sibheke iphutha abanye abantu abalenzayo uma bengena ebhizinisi. Leli phutha yiphutha lokuthi umuntu angayibhekisisi imigomo ehambisana nebhizinisi afuna ukuliqala.
UNksz uNomathemba Langa, umlimi nomsunguli we-Inyama Yethu yaseBrits, eNorth West
UKUTHUTHELA epulazini likayise nokulalela iseluleko sakhe sokuthi azicije ngolwazi lwezokufuya kwenze wangena ebhizinisini lokufuya umfuyi osimamayo waseKrugersdorp, eGauteng.
UNksz uNtsiki Biyela, umsunguli we-Aslina Wines
MHLAWUMBE omunye umuntu wayengadikibala aphele nogqozi ukube wayebhekane nezingqinamba okudlule kuzo usomabhizinisi owenza ezibukwayo embonini yokuvubela nokudayisa iwayini.
UNkk uNomusa noMnu uSifiso Mhlongo, abanikazi beHlengokuhle Embroidery yaseThekwini, KwaZulu-Natali
Abanebhizinisi eliyivelakancane endlini emnyama bakholelwa ebhizinisini lomndeni. Baxoxe noZIMBILI MAZIBUKO
BAGQUGQUZELA ukuthi abaganene babambisane ebhizinisini asebeneminyaka bekhulisa ibhizinisi lomndeni.
UNksz uNosipho Zulu, umsunguli weFood by the Gift, yaseMgungundlovu, KwaZulu-Natali
WAQALA edayisa amakhekhe ama-muffin enyuvesi ukuze angavaleki. Emva kwaloko wengeza amasemishi nama-platter.
UNksz uVuyokazi Majozi, umsunguli weV-Fancymodelgrooming, isikole sokumodela esiseThekwini, KwaZulu-Natali
ABAFUNDI abaningi abasezikhungweni zemfundo ephakeme bahlale bematasa nezifundo zabo futhi balungiselela nezivivinyo. Kodwa kukhona umfundi ohlukile kontanga yakhe. Usheba izifundo nokukhulisa ibhizinisi, okuyisikole esifundisa ukumodela.